न्यायाधीश कार्कीको प्रश्न : हामीले जुलुस हेर्ने कि कानुन ? - Kohalpur Trends
न्यायाधीश कार्कीको प्रश्न : हामीले जुलुस हेर्ने कि कानुन ?
२० माघ, सुर्खेत । सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश हरिकृष्ण कार्कीले जुलुस र प्रदर्शनबाट कस्तो न्यायको अपेक्षा गरेको भन्दै दलहरुलाई प्रश्न गरेका छन् ।
अदालतमा विचाराधीन मुद्धाको फैसला आफनो पक्षमा हुनुपर्ने भन्दै राजनीतिक दल र तीनका कार्यकर्ताले जुलुस र प्रदर्शन गरेर दबाव सृजना गरेको न्यायाधीश कार्कीको आरोप छ । उनले भने, ‘तपाईंहरु आफैं भन्नुस्, न्यायधीशले फैसला गर्न सक्ला कि नसक्ला ?’
उनले अघि भने, ‘न्यायाधीशले बाहिरको जुलुस हेर्ने कि कानुन ? हो यस्तै कुराले न्यायलाई प्रभावित गर्छ । यसलाई कसरी न्यूनिकरण गर्ने भन्ने विषय नै चुनौतीको विषय बनेको छ ।’
जुलुस र प्रदर्शनले न्याय नदिने भन्दै न्यायाधीश कार्कीले प्रमाण, कानुन र मिसिल हेरेर न्याय दिइने बताए । तर जुलुसले न्यायाधीशहरुमा त्रासको वातावरण सिर्जना भएको उनको ठहर छ ।
न्यायपालिकामा विकृति, अनियमितता र विचौलियाबाट हुनसक्ने क्रियाकलापको रोकथाम गर्न विस्तृत अध्ययन गरी प्रतिवेदन पेस गर्न गठित समितिका संयोजक समेत रहेका कार्कीले विस्तृत अध्ययनकै क्रममा सुर्खेत पुगेको बताए । ‘हामीले अझैपनि वैज्ञानिक अनुसन्धान पद्धती अवलम्वन गर्न सकेका छैनौं, अनुसन्धान प्रभावकारी नहुँदा न्याय सम्पादनमा समस्या देखिन्छ,’ न्यायाधीश कार्कीले भने, ‘पैसा खर्च नगरे अदालतबाट न्याय पाइँदैन् भन्ने नागरिकको बुझाइ छ । हामी यही बुझाइलाई चिर्न चाहन्छौं ।’
न्यायालयलाई प्रभावित गर्नेतर्फ नभई सचेतना दिने काम गर्न र न्याय दिलाउन आवश्यक सल्लाह दिन कार्कीको आग्रह छ ।
प्रतिनिधिसभा विघटनविरुद्धको मुद्दा सर्वोच्चमा विचाराधीन रहेकाले आफूले त्यसबारे बोल्न नमिल्ने उनले बताए । ‘अदालत संविधानको व्याख्याता हो, सबै कुरा संविधानमै उल्लेख छ । सोही अनुसार नै फैसला हुन्छ,’ उनले भने ।
Previous Previous post: घुस लिएको आरोपमा सशस्त्र प्रहरीका वरिष्ठ हवल्दार पक्राउ
Next Next post: हुलहुज्जत गर्नेलाई कारबाही गरः भेरी अस्पताल